Fjkm Androva Vaovao Famonjena : Nahazo vola 4 tapitrisa avy amin’ny Filoha mivady -
AccueilRaharaham-pirenenaFjkm Androva Vaovao Famonjena : Nahazo vola 4 tapitrisa avy amin’ny Filoha mivady
Efa rava indroa ny fiangonana Fjkm Androva Vaovao Famonjena noho ny fandalovan’ny rivodoza tamin’ny 1984 sy ny haintrano tamin’ny 1991 nandritra ny krizy nisy teto amin’ny firenena. Tamin’ny taona 1995 ireo mpivavaka tany Mahajanga aman’arivony vao afaka nanarina ny fotodrafitrasa, vokatry ny ezaka avy amin’ireo mpino kristianina tsirairay avy. Naneho fankasitrahana an’ireo mpino kristianina manoloana ny ezaka lehibe fanarenana ny fotodrafitrasa ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina nandritra ny fandalovany tao amin’ny fiangonana Androva Vaovao Famonjena omaly tolakandro. Nanolotra vola mitentina 4 tapitrisa Ariary ihany koa ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina mivady ho fampandehanan-draharaha eo anivon’ny fiangonana.
« Sahia ho vavolombelon’i Jesosy Kristy », io no lohahevitry ny fanompoam-pivavahana notarihin’ny pastora Jean Félix Ramaharavomanana izay notsongaina tao amin’ny Salamo 89, 34-37, ny Jeremia 31, 31-34, ary ny Jaona 7, 37-39 sy ny Hebreo 10, 11- 18. Tao anatin’io lohahevitra io no nitondran’ny filoham-pirenena teny ho an’ireo mpino kristiana ny amin’ny tokony hanaovana asa tsara manoloana ny mpiara-belona, ary ho fandraisana anjara amin’ny fampandrosoana ny firenena. Nasian’ny filoham-pirenena teny ihany koa ny mahakasika ireo ady lehibe atrehin’ny firenena toa ny fahantrana, ny kolikoly ary ny fanimbazimbana ny tontolo iainana. Tokony hanova toe-tsaina ny tsirairay ahafahana mandresy ireo olana maro izay mampitondra takaitra ny fampivoarana ny firenena.
Efa mazava ny raharaha fivarotana trano sy ny tany etsy amin’ny villa Elizabeth, ary misy ny porofo mivaingana fa dia ny minisitra irery ihany tamin’izany fotoana, sy ny filohan’ny Tetezamita, izay afaka manome ny baiko ...Tohiny